Nyaya yakatangira pandaitaura nemuzukuru wangu madzimai vangu vasipo tichinyeya maid. Muzukuru wangu ange ati arikuda kusvira maid uyu saka aikumbira permission yangu sezvo aive mushandi wangu. Ndakaseka but takatanga zvedu kurumbidza maid zvechiboyz, tichiti hee anemagaro mahombe, mazamu achoo uum kunyatsoita round kunge maapples. Mumwe akati maybe anonaka zvisingaiti.
Takenderera mberi tichingofantasaiza, muzukuru wangu akati paachamukwira achanakirwa zvekuoma gotsi chaizvo. Ini kwaakuti ndikamuwanikidza ndinomufendesa nayo nyoro. Taitaura kudai tiri panze kuseri kwegaraji but hatina kuziva kuti maid anga abudawo panze achinzwa tichumunyeya kudaro. Akazokosora hake tikabva tacheuka tikaona achinyemwerera nyemwerera semisi yose isu tika recover very fast tikangoseka-seka zvedu. Akabva ati breakfast rave ready huyai mudye.
Ndakabva ndasimuka ndakananga kukitchen kwaange ari. Handina kutaura kana chinhu, ndakangosvika ndichitanga kumukisa ndichipuruzira magaro ake. Iye she kissed me back, mwana ane masoft lips haikona kutaura mhani. Apa ini mboro yangu yainge yaita sebvumbi ravhundutswa nebhinya. Akaswedera pandiri akagunzwa zimboro riye akavhunduka ndikanzwa oti maiwee! nepasipasi. Takaramba tichikisana kudaro kwekanguva ndikatanga kubata bata mazamu ake, apa nguva yose muzukuru akatarisa
Kusvira Maid while madam was sleeping
Pakange pasina time yekunotsvaga kondomu, ndakamuti akwidze gumbo one pamusoro pekitchen counter, ndikamufongoresa ndikabva ndapinza zimboro rangu zvine simba nehasha nepaside pekapanty kake ikako, ndobva ndaita zvekuisa chaiko about 5 or 5 times. Mwana akahwihwidza zvepasi pasi uku achiedza kutambisa machende angu. Pasina chinguvana gumbo rake rakatanga kubvunda bvunda achitunda ini ndichingokoira chete ndakabata magaro.
Akaedza kuda kutambisa magaro back but akabva ashaya simba. Masasi unongonzwa iwe, Mboro yange yakazadza beche rese apa riri tight. Ndainyatsoona beche rese rakamedza mboro rakazara. Ini ndaiti ndikati yese bvoo, ndokoira koira ndomboburitsa ndodaro futi. Ndakazonzwa mwana zii ini ndichitambisa zvangu tumanipplies itwotwo nekupuruzira magaro uku mboro yakangonyura chete. Ndakachinja ndikazobata magaro nemaoko ose kwakutanga kuchikoira ndichirova macorners ese ebeche iya inonzi Heavy Attack yenyini. Mwana aive nemagaro ainyevenutsa moyo. Mboro yaibuda yakanyatsonunira nemajuices ebeche iye achingofemereka femereka semunhu arikubatwa ne Asthma Attack. Beche rainaka iroro apa rakati mbambamba kubatirira pamboro.
Muzukuru wangu ndiye akazotivhundutsa oti imi chipedzai mhani munozowanikidzwa, plus maakundibhowa. Maid akazomhanyira kutoilet nekuti masperms ange akudzika negumbo…kkkk takamuseka. Akadzoka pave paya achiti i think stress yenyu babaT yambodzikira manje. Nanhasi ndikarangarira musi uyu mboro yangu inongoera yamira at attention semusoja akagadha president kucongress. Muzuru hameno kuti akazopihwawo here beche asi ini i know kuti once ndasvira ka1 its non stop unenge watotenga chikwambo chete…
Hokoyo Maid ndosvira futi…
Tormented nebonyora nemukoma wemukadzi
Kusvira sisi vemusikana wangu ku Borrowdale
Updated: November 11, 2020 — 12:57 am